Momba anay - Fuzhou Technic Power Co., Ltd.
Fuzhou Technic Power Co., Ltd dia miorina ao an-tanànan'i Fuzhou, faritanin'i Fujian, Sina, izay mpanamboatra matihanina ary mpanondrana vokatra elektronika maro karazana manarona motera elektrika（IE2, IE3 motera avo lenta, motera GHOST）, paompin-drano (paompy ambony, paompy ao anaty rano, paompy lasantsy sns), mpamokatra lasantsy / gazoala ampiasain'ny KOHLER, HONDA, compresseur-drivotra ary ireo kojakoja ilaina.
Technic Power dia manana zavamaniry ao aminy tanànan'ny Fu'an. Manana zavamaniry vokatra roa izahay, ny iray natao ho an'ny paompy rano, ny iray ho an'ny motera elektrika sy mpamokatra lasantsy. Misy tsipika famokarana 5 ao amin'ny tobim-pamokaran-drano, ary 6 ny andalana famokarana ao amin'ny tobin-tsolika / mpamorona. Misy mpiasa maherin'ny 200 miasa ao amin'ny orinasa, ny ankamaroan'izy ireo dia miasa ho anay 10 taona mahery. Ao amin'ny zavamaniry dia manana mpanaraha-maso kalitao maherin'ny 20 miaraka amin'ny fitaovana fanaraha-maso kalitao maoderina.
Ny vokatray rehetra dia ao anatin'izany ny paompy rano, motera elektrika, mpamokatra herinaratra manana fanamarinana CE feno navoakan'ny TUV, INTERTEK, ISET sns. Ny CE dia misy ny torolàlana momba ny milina 2006/42 / EC, torolàlana ambany haavo 2014/35 / EU, fampifanarahana elektromagnetika 2014/30 /EU; Ho an'ny mpamokatra lasantsy / gazoala sy lasera dia manana mari-pankasitrahana ihany koa izahay ary manao tatitra 2000/14 / EC ary Euro V Emission. Mandritra izany fotoana izany, ny orinasanay dia nandalo ny ISO 9001.
Raha ampitahaina amin'ireo ozinina hafa misy antsika dia manana ireto tombony manaraka ireto ny Fuzhou Technic Power:
1.Product isan-karazany avy amin'ny maotera elektrika, paompy rano, mpamokatra lasantsy, lasantsy lasantsy sns. Ny vokatra rehetra dia manana endrika maoderina, ary isan-taona dia hisy endrika vaovao ho an'ny tsena.
2.Feno mari-pankasitrahana toy ny CE, Rohs, ISO 9001 sns
Sampana teknisiana matanjaka miaraka amin'ireo injenieran'ny 10 mahery, manao ny endrik'i OEM sy ODM isan-karazany.
Departemanta 4.Strong QC miaraka amin'ny zavatra 10 mahery manara-maso ny kalitao avy amin'ny fitaovana miditra amin'ny fizotry ny famokarana mankany amin'ny fandefasana.
5. Sampana fivarotana mahaliana izay manome serivisy ho an'ny mpanjifa manerantany. Ny mpivarotra rehetra dia manana traikefa amin'ny vokatra ary afaka manome serivisy tena matihanina amin'ny mpanjifanay.
Ny Technic Power dia mandray an-tsitrapo ireo mpanjifa manerana an'izao tontolo izao hitsidika ireo fivarotanay sy hiresaka ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa. Fahafinaretanay ny manome vokatra sy serivisy ho an'ny mpanjifantsika.
Nandritra ny fivoaran'ny 15 taona mahery, Technic Power dia manana ekipa mpivarotra matotra, izay natokana hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa. Ny ankamaroan'ny olona mpivarotra dia niditra an-tsehatra amin'ity orinasa ity nandritra ny 10 taona mahery, mba hahafahan'izy ireo mihazona ny fironana amin'ny tsena sy manome serivisy matihanina bebe kokoa ho an'ny mpanjifa.
Miaraka amin'ny fitaovam-pamokarana modem, rafitra fiasa mandroso, sampana matihanina R&D ary ekipa QC za-draharaha, afaka manome ny mpanjifa tsy vokatra tsara kalitao izahay fa fahombiazan'ny asa ambony ihany koa.
Miarahaba ny mpanjifa avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao ny Technic Power. Ny fahafaham-pon'ny mpanjifa dia ny fikatsahan'ny Technic Power hatrany.